Barnaamijyada Chrome ee loogu talagalay Mac, Project Wolfe, Appel Music London Festival iyo waxyaabo kaloo badan. Waxa ugu fiican usbuuca ee SoydeMac | Waxaan ka socdaa mac
Tani hadda kahor waa Axaddii ugu dambaysay ee Ogosto inkasta oo aynaan geli doonin Sebtember illaa Khamiista toddobaadka soo socda, oo dhammaan kuwa ku jira fasaxa waxay arkayaan "ku soo noqoshada caadiga" dhinac walba way ka yimaadaan. Laakiin marka laga hadlayo Apple xagaagan shaqo badan ayaa haysa haddii aan eegno tirada noocyada beta ee dhammaan nidaamyada hawlgalka ee imaan doona dhowr maalmood iyo sii deynta noocyada 'iOS' ee daboolaya godadka amniga ee muhiimka ah, gaarayo macruufka 9.3.5 toddobaadkan. Sikastaba xaalku ha ahaadee waxaa jira warar aad ufiican oo kusaabsan Apple iyo dunida Mac, marka aan u nimaadno.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ugu muhiimsan waxaan dhihi karnaa taas Waxay xiriir la leedahay Apple inkasta oo ay ka badan tahay Google. Tani waa dhamaadka taageerada loogu talagalay Barnaamijyada Chrome ee Mac waxaa iska leh shirkadda weyn ee G. Sidaa darteed bilowga 2018 Google ayaa ka saari doonta taageerada barnaamijyada Chrome ee ku jira biraawsarka Mac.
Dhinaca kale, waxaan haynaa cusbooneysiin muhiim ah oo ku saabsan aaladaha lagu maareeyo PDF-yada Mac. Qalabka Khabiirka PDF 2 Mac wuxuu helayaa cusbooneysi xiiso leh iyo dhammaan faahfaahinta aad awoodid halkan ka hel.
Kaalinta saddexaad waanu kaaga tagnay Wolfe, mashruuc Kickstarter in wuxuu u rogaa MacBook qaab-hawleed sare oo lagu ciyaaro. Mashruucan cusub wuxuu noqon karaa mid aad loogu guuleysto kuwa adeegsada gamer-ka ee haysta Mac.
Wararka soo socda ayaa la xiriira koodh isha taas ayaa lagu ogaadey macOS Sierra 10.12 taasna waxay xaqiijineysaa taas Macs soo socda ayaa ku dari doona horumarin weyn iyo xoogaa isbeddelo ah ixtiraam mashiinnada hadda jira.
Ugu dambeyntiina waxaan ka tagnay ogeysiiska rasmiga ah ee Bandhigii Apple Music London halkaas oo sacab faro badan oo farshaxanno caan ah oo ka socda goobta muusigga ay ku qaban doonaan. Waxaa ka mid ah Afurayaasha licia, Elton John ama Britney Spears iyo kuwo kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Barnaamijyada Chrome ee loogu talagalay Mac, Project Wolfe, Appel Music London Festival iyo waxyaabo kaloo badan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac